Cunnooyinka kujira macdanta Potassium: dhamaan waxa kusaabsan macdantaan muhiimka ah | Ragga Stylish
Oo ay ku jiraan cuntooyinka hodanka ku ah macdanta potassium ee cuntadaada waa a lagama maarmaanka u ah caafimaadka wanaagsan. Laakiin maxay yihiin cuntooyinkan iyo immisa potassium ayaad u baahan tahay maalintii?
Soo ogow cuntooyinka hodanka ku ah macdanta potassium (mooska waa kan ugu caansan, laakiin waxaa jira kuwa kale oo badan oo aad ku dari karto cuntadaada), iyo sidoo kale qadarka maalinlaha ah ee lagugula taliyay macdantaan.
1 Waa maxay macdanta loo yaqaan “potassium” maxaase loogu talagalay?
1.1 Dhiig kar
1.2 Murqaha iyo neerfaha
1.3 Qiyaasta tamarta
1.4 Cunnooyinka bixiya tamarta
2 Saamaynta maqnaanshaha potassium
3 Miyaad qaadataa potassium ku filan?
4 Waxa loo cuno kaalshiyamka
4.2 Qaraha iyo faaidooyinkiisa
4.7 kuwa kale
Waa maxay macdanta loo yaqaan “potassium” maxaase loogu talagalay?
Potassium waa macdan laga helo cuntooyinka qaarkood. Maaddaama laga helo tiro badan oo ka mid ah cuntooyinka waaweeyn ee caadiga ah, macdanta macdanta "potassium" waa nafaqo si fudud loo heli karo.
Joogitaankiisa dhammaan unugyada jirka wuxuu na siinayaa fikrad ah sida ay ugu habboon tahay caafimaadka, laakiin aan isku dayno inaan si gaar ah u qeexno:
Marka laga hadlayo faa'iidooyinka, doorka ugu weyn waxaa laga ciyaaraa caafimaadka wadnaha. Waana taas macdanta potassium waxay ka hortagtaa dhiig karka laba siyaabood. Marka hore, waxay ka caawisaa ka saarida soodhiyamka xad-dhaafka ah jidhka jidhka kilyaha iyo kaadida. Marka xad-dhaafkan aan laga takhalusin, halista dhiig-karka iyo dhibaatooyinka la xiriira ayaa kordha. Dhinaca kale, halbowlayaasha dhibka badan ayaa sidoo kale kordhin kara cadaadiska dhiigga. Iyo macdanta potassium waxay ka caawisaa inay isdejiyaan.
Murqaha iyo neerfaha
Muruqyadaada iyo neerfahaaga sidoo kale waxay ubaahan yihiin potassium inay si caadi ah u shaqeeyaan. Lafaha sidoo kale waxay u baahan yihiin inay xoog yeeshaan, sidoo kale kelyaha iyo wadnaha.
Tamarta ay bixiso waa faaiido kale oo caan ah oo laga helo macdanta potassium., taas oo ay ciyaartoydu wax badan ka heli karaan. Sidaa awgeed, waa nafaqo aan ka maarmi karin cuntada qof kasta.
Cunnooyinka bixiya tamarta
Fiiri maqaalka: Cunto firfircoon. Halkaas waxaad ka ogaan doontaa waxaad cuni lahayd markaad u baahato qadar dheeraad ah oo tamar ah.
Saamaynta maqnaanshaha potassium
Heerarka macdanta 'Potassium' waxay la xiriiraan soodhiyamka iyo taa lidkeed. Kordhinta heerarka soodhiyamku waxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaadda macdanta 'potassium'. Taabadalkeed, hoos u dhaca soodhiyamku wuxuu keenaa koror.
Markaad ku xanuunsato yaraanta potassium, qaybaha kala duwan ee jirka ayaa shaqada si fiican u joojin kara. Cawaaqibyadu waxay u dhexeeyaan murqo xanuun ilaa isbedelka cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha.
Miyaad qaadataa potassium ku filan?
Dadka qaarkiis kuma helaan potassium ku filan cuntadooda. Caadi ahaan, xaaladani sinnaba kuma haboona, maadaama nafaqadan ay muhiim u tahay jirka.
Shuruudaha loo yaqaan 'Potassium' ayaa ah ugu yaraan 3.5 garaam maalin kasta dadka caafimaadka qaba. Taasi waa xaddiga lagama maarmaanka u ah jirku inuu ku fuliyo dhammaan shaqooyinkiisa si caadi ah.
Haddii aad u maleyneyso inaadan helin potassium ku filan iyo sidaa darteed, waa inaad kordhisaa qaadashada macdantaan, cunnooyinka soo socda ee ay ka buuxdo macdanta potassium ayaa kaa caawin doonta inaad gaarto lambarkaas.
Waxa loo cuno kaalshiyamka
Iyada oo nafaqadan ay ku dhacdo taasi cuntooyinka hodanka ku ah macdanta potassium sidoo kale badanaa waa khudradda. Sidaa darteed, cunidda macdanta loo yaqaan 'potassium' waxay heshaa nafaqooyin kale oo badan oo ku jira kooxahan cunnada. Waxay sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad cunto cunto caafimaad leh oo ay ka hortagto culeyska iyo cayilka.
Midhaha ugu caansan ee loo yaqaan potassium-ka waa mooska. In kasta oo ay bixiso qiyaas badan oo ah macdanta potassium, sidaa darteedna ay tahay in lagu daro cuntada, mooska ma aha miraha kaliya ee ku siin kara qiyaas ah macdantaan muhiimka ah.
Orange, cantaloupe, khudaar, avokado, iyo qaraha ayaa sidoo kale ku jira qadar xiiso leh oo ah potassium..
Qaraha iyo faaidooyinkiisa
Fiiri maqaalka: Faa'iidooyinka Qaraha. Halkaas waxaad ka heli doontaa dhammaan faa'iidooyinka caafimaad ee midhahan xagaaga ee caafimaadka iyo macaan leh.
Khudaar noocee ah ayaa bixisa inta ugu badan ee Botaashka ah? Haddii aad rabto inaad ku kordhiso qaadashada nafaqadan kooxdan raashinka ah, tixgeli isbinaajka, Cunto sidoo kale ku siin doonta magnesium, iron, fiber iyo fitamiin C. Kari ama ku kari basbaas xoogaa taabasho leh.
Cagaarka iyo khudaarta kale ee aan ka maqnaan karin gaadhigaaga dukaameysiga, oo keliya ma aha maadadda ay ka kooban tahay potassium, laakiin sidoo kale hodantinimada nafaqada ee guud ahaan, waa broccoli, qajaar, eggplant, digir, yaanyo, bocor, iyo zucchini.
Marka la eego qaadashada potassium, Waxaa kaloo mudan in la muujiyo doorka digriiga sida baradhada iyo baradhada macaan.
Ku dar cuntadaada digirta, digirta lima iyo misir si loo hubiyo qadarka maalinlaha ah ee lagugula taliyo ee potassium.
Ma ogtahay in miraha gabbaldayaha ay ku jiraan macdanta potassium. Waad u cuni kartaa iyaga aperitif ama waxaad ku dari kartaa saladhyada, laakiin xusuusnow inaad u tagto noocyo aan milix lahayn.
Cunto kale oo hodan ku ah potassium oo diyaar u ah inaad tagto waa sabiib. Laakiin fiirso tirada kalooriyada, maadaama ay ku jiri karaan xaddi badan oo sonkor ah.
Haddii aad jeceshahay kalluunka, waxaad xiisayn doontaa inaad taas ogaato tuna, salmon duurjoog ah, halibut, kalluun iyo kalluun ayaa leh qaddar macdan ah.
Waxaad sidoo kale ku heli kartaa macdanta potassium lowska, hilibka, bariiska buniga ah, badarka oo dhan, baastada, boqoshaada, iyo qaar ka mid ah waxyaabaha caanaha laga sameeyo, oo ay ku jiraan caano iyo caano fadhi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cuntooyinka hodanka ku ah macdanta